XOG XASAASI: ‘‘Garoonka Aadan Cadde ma noqon karo mid la mid ah isbaarooyinkii ka jiray dalka‘‘! waxa yiri.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: ‘‘Garoonka Aadan Cadde ma noqon karo mid la mid ah...
XOG XASAASI: ‘‘Garoonka Aadan Cadde ma noqon karo mid la mid ah isbaarooyinkii ka jiray dalka‘‘! waxa yiri..
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi/Sawir hore/Keydka HQ
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay is hor istaagii lagu sameeyay Wafdigii Madasha Xisbiyada Qaran ee ku sii jeeday Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan.
Mudane Fiqi ayaa sheegay arrin laga xumaado inay tahay in hakad la galiyo madax gurmad u sameynaysa shacabka reer Baledweyne oo ay saameysay fatahaadii ka dhalatay Wabiga Shabelle.
“Waa wax laga xumaado in hakad la geliyo socdaal ay saakay ku tagi lahaayeen madaxda madasha xisbiyada qaran magaalada Baledweyne ayagoo ujeedkoodu ahaa gurmad u fidinta dadka Soomaaliyeed ee fatahaadda webigu ay saamaysay.” Ayuu yiri Xildhibaan Fiqi
Sidoo kale, Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu arrintaasi ku tilmaamay inaysan jirin sabab is hor taag loogu sameeyo gargaar loo wado dad dhibaateysan.
“Sabab gargaar loo wado Beledweyne isbaaro loogu dhigto ma jiri karto, laakin waxay muujinaysaa niyad xumada kooxda Villa Somalia iyo halka uu gaarey falfal-xumadoodu.”
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay Garoonka Aadan Cadde inuusan noqon karin mid la mid ah Isbaarooyinkii dalka ka jiri jiray.
“Garoonka Muqdisho ma noqon karo mid la mid ah isbaarooyinkii dalka ka jiri jiray, cid laga yeelayana ma jirto wax aan sharciga waafqsanayn, Baledweyne waa tagis si kastoo turaanturooyin loogu horgudbo.”
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde loo diiday inay ka dhoofaan wafdi uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed oo ku sii jeeday magaalada Baledweyne, si ay ugu gurmadaan dadkii ay saameysay fatahaadii wabiga shabelle.
isbaaro taallo garoonka Aadan Cadde
wax laga xumaado